Nikela - BullyingCanada
Ukupha kwenu kuyosindisa ukuphila.
Ngokwenza umnikelo onakekelayo, uzonikeza izingane ezixhashazwa ikusasa eliqhakazile.
Lo bhubhane ushiye izingane zintekenteke ngokwengqondo. Uma nazo zixhashazwa, zivame ukududulelwa onqenqemeni. Ngokusekela kwakho okucatshangelwayo, sizoqinisekisa ukuthi izinsiza zethu zokweseka zikhona ukuze zibenzele noma nini, noma nini, mahhala, ukuze kuqedwe ukuxhashazwa kwabo.
Chofoza lapha ukuze wenze umnikelo onakekelayo namuhla!
Uma ufisa ukuphrinta ifomu lomnikelo, ligcwalise futhi ulithumele kulo BullyingCanada, landa Ifomu lakho Lomnikelo lapha. Ikheli lethu leposi lithi 471 Smythe Street, PO Box 27009, Fredericton, New Brunswick, E3B 9M1.
iminyaka yenkonzo ehlinzekwa ngu BullyingCanada
Ukukhala ngokuphelelwa yithemba ngosizo olutholwe ngo-2021
Izikhathi eziningi zikhala ngosizo olutholiwe futhi lwasizwa ngo-2021, uma kuqhathaniswa nobhubhane lwangaphambi kuka-2019
Isilinganiso senani lemizuzu intsha ilinda kuze kube yilapho ixhumana noMphenduli Wokusekela
Ukuvakasha kwezigidi ku BullyingCanada.ca ngo-2021
Inani lezilimi ukuthi BullyingCanada.ca inikezwa ngo
Ezinye izindlela zokubonisa ukwesekwa okukhathalelayo BullyingCanada
Yiba Umphenduli Wokusekela, noma usize ngemisebenzi yokuphatha. Siyasazisa isipho sakho sesikhathi namakhono!
Yenza okuthile okujabulisayo ukuqoqela imali BullyingCanada!
Boleka inkampani yakho ukwesekwa, futhi waziwe ngokuba isakhamuzi sebhizinisi esinakekelayo!
Izipho ezinkulu nezipho zezibambiso ezihlonishwayo ziyasiza BullyingCanada hambisana nesidingo esikhula njalo sosizo lwethu.
Endala noma entsha, egijimayo noma cha, kulula emotweni engafuneki ekusekeleni okusuka enhliziyweni ezinganeni ezixhashazwayo!
Izipho ezenziwe ngencwadi yakho yefa, umshwalense nokonga komhlalaphansi zizosekela intsha ehlukunyezwayo ezizukulwaneni ngezizukulwane!
Siyabonga kubasekeli bethu abaphanayo kakhulu!
Vakashela ikhasi lethu labaxhasi ukuze uhloniphe abaxhasi bethu abakhulu!
Thola Usizo Manje—Awuwedwa
24/7/365 ukwesekwa ngocingo, umbhalo, ingxoxo, noma i-imeyili
Ingabe ufuna ukunikela ngesikhathi sakho?